Ahoana ny fomba hamoahana ny tanjona amin'ny fandresena amin'ny lalao E-Commerce | Martech Zone
Ahoana ny fomba hamoahana ny tanjona amin'ny fandresena amin'ny lalao E-Commerce
Alatsinainy, Jolay 14, 2014 Kelsey Cox
Na dia amin'ny Tompondaka Erantany aza tsy misy afa-tsy mpandresy iray ihany, orinasa maro no afaka miaina fahombiazana amin'ny lalao e-Varotra. Misy ny tetika voaporofo izay nanampy tamin'ny isa ny mpivarotra. Baynote Mampiseho anao ny fomba fametrahana ireo mpilalao mahay indrindra ary mamorona drafi-dalao mavitrika mba hahafahan'ny orinasanao e-Varotra hitondra fandresena mody.
Alohan'ny hanombohan'ny vanim-potoana, ny ekipa dia tokony hampiasa vola amin'ny mpilalao voalohany. Raha resaka e-Commerce 5 amin'ny 10 fampiasam-bola lehibe indrindra dia ny varotra. 56% ny mpivarotra mampiasa vola amin'ny marketing amin'ny motera fikarohana sy ny fahazoana ny mpanjifa, 51% amin'ny fitazonana ny mpanjifa, 48% amin'ny pejy manan-danja nohatsaraina, ary 42% amin'ny SEO. Ao amin'ny sary eto ambany, Baynote manolotra ny angona avy amin'ny fanadihadiana momba ny mpivarotra faha-14, izay mampiseho ny toerana fampiasam-bolan'ny mpivarotra, ny fomba ahitan'izy ireo ny filàna miovaova sy ny filan'ny mpivarotra ary ny paikady izay manome ny ROI lehibe indrindra.
Tags: mitondra varotrae-varotravarotra ecommercee-varotra findayROIamboara eran-tany 2014
Kelsey Cox dia talen'ny serasera ao Tsanganana fahadimy, masoivoho mpamorona iray izay manampahaizana manokana amin'ny fampisehoana sary, infografika, fampielezan-kevitra ary PR nomerika any Newport Beach, Calif. Mafana fo amin'ny ho avin'ny atiny nomerika, doka, marika ary endrika tsara izy. Tena mankafy ny morontsiraka sy mahandro ary labiera mpanao asa-tanana koa izy.
Fomba 5 amin'ny fomba akaiky ny marketing eo amin'ny mpanjifa
Ahoana ny fomba hisafidianana vahaolana ho an'ny varotra mandeha amin'ny varotra
Jul 21, 2014 amin'ny 3: 38 AM
Nahafantatra zava-baovao maro momba ilay tranonkala e-varotra aho ary azoko antoka fa hanampy ahy be dia be izany. Tiako ny fanaovana sary an-tsaina ny fahalalana eto ary hiasa mitovy.